VaChamisa Voshuvira Zimbabwe Zuva Rakanaka Ichicherechedza Kusvitsa Makore Makumi Mana Ichizvitonga
Kubvumbi 18, 2020
Mutungamiri weMDC, Va Nelson Chamisa, vatumira mashoko avo kuruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe vachivakorokotedza pakusvika kwaita Zimbabwe makore makumi mana yawana kuzvitonga.
VaChamisa vati vari kuziva kushupika kuri kuita veruzhinji munyika panguva iyo nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere Coronavirus, uye vachimanikidzwa kugara mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi, icho chabata vanhu makumi maviri nevana muZimbabwe, uye kuuraya vanhu vatatu.
Chirwere ichi chabata vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe ezviuru, uye kuuraya vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mashanu nezvinomwe.
VaChamisa vati zvakakosha kuti nyika itarise kwayakabva, uye zvakaitika mumakore makumi mana apfuura, senzira yekuvaka hwaro hweremangwana renyika.
Vati mumakore apfuura aya, pane zvakawanda zvakaitwa munyaya dzekugadzirisa zvaikanganiswa.
Asi vati zvinhu zvinosuwisa kuti nyika yakaona kupondwa kwevanhu vanodarika makumi maviri ezviuru kumatunhu e Matabeleland ne Midlands, munguva yeGukurahundi.
VaChamisa vatiwo vanhu vakawanda vakatyorerwa kodzero dzavo munguva yeMurambatsvina, uye musarudzo dzakaitwa muna 2008, idzo dzakaona ropa revanhu vakawanda richideurwa.
VaChamisa varatidzawo kushushikana nehuori hwavati huri kuitika munyika, uhwo vati huri kuparadza hupfumi hwenyika.
VaChamisa vati shuviro yavo ndeyekuti muZimbabwe muve nepfungwa yakanangana nekusimudzira hupenyu hwemunhu wese, muve nesarudzo dzinoitwa zvisina kupikisana mukati.
VaChamisa vatora mukana uyu kuenzanisa kukosha kwemakore makumi mana nezviri mubhaibheri zvinobata makore mana akaitika akaratidza kusimuka kwevana veIsrael mushure mekushupika kwemakore akawanda vari kunze kwenzvimbo yavo yechipikirwa kwemakore makumi mana.
Bhaibheri rinoratidza kuti chinangwa chaMwari chaive chekuti vana veIsrael vatore nyika yavo yavakanga vavimbiswa mukati memazuva, asi izvi zvinonzi zvakazotora makore makumi mana kuti zviitike.
Mutungamiri veMDC vatiwo zvisineyi nematambudziko akatarisina neveruzhinji panguva ino, vanoshuvira zororo rakanaka renyika vanhu vachicherechedza kusvika kwavaita makore makumi mana nyika yawana kuzvitonga muna 1980.
Mashoko aVaChamisa kuVana veZimbabwe